Nepali Rajneeti | जागिर चाइयो ? हामी दिन्छौं जागिर, ३० देखि ३५ हजार तलब
जागिर चाइयो ? हामी दिन्छौं जागिर, ३० देखि ३५ हजार तलब
मंग्सिर ६, २०७७ शनिबार २६४ पटक हेरिएको
पढाइ सकियो, तर जागिर छैन । यो धेरैलाई लागेको सम स्या हो । तर जागिर खोजेर समय वर्वाद गर्नुभन्दा आफुले केहि काम सिके जागिरले आफुलाई खोज्दै आउँछ । नेपा लमा केहि काम गर्नेहरुको यति खडेरी छ कि तपाईं सोच्न समेत सक्नुहुन्न । यी काम सिके बेरोजगार बन्नुपर्ने वाध्यता हट्छ भने राम्रो कमाई पनि हुन्छ ।